Dad lagu dilay Niger - BBC Somali
Dad lagu dilay Niger
Kooxda jihaad doonka ah ee Boko Xaram ayaa ku dishay 16-qof oo rayid ah dalka Niger, taas oo ciidamadooda ay qeyb ka yihiin midowga gobalka, kuwaa oo looga gol leeyahay in wax looga qabto aragaxisada ka jirta waqooyiga Nigeria.
Kooxdan ayaa weeraray tuulada Gogone, ee ku taal koonfurta gobalka Diffa.
Duqa deegaankaasi ayaa xaqiijiyay weerarka, dadka halkaa ku noolna wax ay sheegayaan in dadka la dilay la aasay.
Gobalka Diffa, ayaa waxa saarnaa xaalad dag-dag ah tan iyo bishii Feberaayo, taa oo daba socota weerarada isa soo taraya ee kooxda Boko Xaram oo ay ka mid yihiin isku qarxinta.
Dalalka Niger, Cameroon iyo Chad, ayaa dhamaantood waxa ay waxyeela ka soo gaareen weerarada ay geysanayaan kooxaha ka soo horjeeda ee ku gacan sareeya waqooyiga Nigeria.
Waxa isa soo taraya qatarta kooxahan ay ku hayaan dalalkan ku teedsan harada Chad Basin, waxa ayna arrintaa sababtay in ay sameystaan Milatari gobolkaasi ah.
Waloow ay soo socdeen weerarada ka dhanka ah kooxdan oo ay qaadayaan milatariga Nigeria iyo dalalka dariska ah si loo wiiqo raggan hubeysan, ayaa haddana weli waxa ay awoodaan in ay geystaan weeraro ba’an.
Xarunta hay'adda difaaca ee Nigeria ayaa sheegeysa in dalalka qaar ee midowgan ka tirsan ay weli soo dirin ciidamadooda si ay uga qeybqaataan barnaamijkan.